Hetauda Khabar - हेटौंडामा कहिले बन्छ पशुबधशाला ? स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने बिषयमा मौन छ सरकार
हेटौंडामा कहिले बन्छ पशुबधशाला ? स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने बिषयमा मौन छ सरकार
हेटौंडामा स्थानीय सरकारले व्यवस्थित पशुबधशाला निर्माण गर्न नसक्दा व्यवसायीले जथाभावी पशुबध गर्ने गरेका छन् ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडानंम्बर २ बालजागृति बोडिङ नजिक बस्तिमा भैसी र राँगाहरु खुल्ला रुपमा बध गर्ने र ओसार पसार गर्दा स्थानिय वासिन्दाहरु सधै दुर्घन्धको सिकार भएका छन् । बजारको बिचमा रागा, भैसी काट्ने, तीनको छाला अव्यवस्थित ढंगले राख्ने गर्दा यहाँका स्थानिय वासिन्दालाई समस्या हुने गरेको छ । संगमचोक, सिद्धार्थरोड, पुरानो मकवानपुर रोड लगायतका क्षेत्रमा जथाभावी गरिने पशुबध र त्यसबाट निस्किने फोहोर नियन्त्रणका बिषयमा स्थानिय प्रशाशन, अदालत, प्रहरी प्रशाशन सबैलाई जानकारी गराउँदा पनि चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ ।
बजारको बिचमै बधशाला संचालन गरेर असर गरेको भन्दै तत्कालिन पुनराबेदन अदालत हेटौंडा, जिल्ला प्रसाशन कार्यालय र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले त्यहाँबाट गाई, भैसी बधगर्ने काम बन्द गर्नका लागि निर्देशन दिएपनि कार्यनयन भने नभएको बालजागृति बोडिङ स्कुलका प्रिन्सीपल बिनोद सुबेदीले बताउनुभयो । भैसी रागाहरु बध गरेपछी निस्किने फोहोर सडक, नालीमा फालिदिएकाले समस्या भएको स्थानिय वासिन्दाहरुले बताएका छन् ।
पशुबध गर्दा र भैसीको छाला ओसार पसार गर्दा विद्यार्थीले बान्ता समेत गर्ने गरेको सुबेदीले बताउनुभयो । सधै डर, धाक धम्की दिदै पशुबध बस्तिमै गरिदै आएको स्थानिय महिलाहरु बताउँछन् ।
यसबारे जिल्ला प्रसाशन कार्यालय मकवानपुरले बुधबार अनुगमन गरेको छ यो समस्या धेरै अघिदेखिको भएकाले हेटौंडा उपमहानगरपालिका संग समन्वय गरी समस्याको समाधान गर्ने बताउनुभयो ।
कहिले बन्छ व्यवस्थित बधशाला
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले हेटौंडामा व्यवस्थित पशुबधशाला निर्माणका लागि ०७४ पौषमा जग्गा र उपयुक्त स्थानको खोजीका लागि हेटौडा उपमहानगरपालिकाकि उपमेयर मिना लामाको अध्यक्षतामा समिति समेत गठन गरिएको थियो तर झन्डै १ बर्ष पुग्न लागिसक्दा पनि कुनै प्रगति भने देखिएको छैन । बधशाला नहुदा विभिन्न कारणले मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परिरहेको भएपनि यहाको स्थानीय सरकारले केहि गर्न सकेको छैन ।
हामीले यस बिषयमा हेटौडा उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर मिना लामालाई बधशालाको कुरो कहाँ पुग्यो ? भनि सोध्दा बधशाला निर्माणमा केहि ढिला हुन गएको बताउनुभयो । केहि प्राविधिक कारण केहि ढिला भयो, बधशालाको लागि जग्गा भैसकेको छ अब निर्णय हुन मात्र बाकि को लामाले भन्नुभयो ।
अहिले हेटौंडामा अव्यवस्थित ढंगले कुखुरा, खसी, बोका, रागा, पाडा पाडी, काटिने गरेको छ । जसका कारण आम उपभोक्ताले अस्वस्थकर मासु खान बाध्य छन् भने अर्कातिर बस्तीमै जताततै पशुबध गरिएकाले दुर्गन्धित संगै फोहोरका कारण मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पारिरहेको छ । यस बिषयमा सम्बन्धित निकायको चाडै ध्यान जाओस् ।